Ny FBI dia mamaritra an'i Apple ho "genie ratsy", manondro ny fiarovana avo aroson'izy ireo | Avy amin'ny mac aho
Ny FBI dia mamaritra an'i Apple ho "genie ratsy", manondro ny fiarovana avo izay arosony
Asan'ny Apple amin'ny fiarovana Tsy voamariky ny sisa amin'ireo orinasa teknolojia sy ireo mifandraika amin'ny tontolo iainana cyber, ny tsiambaratelon'ny mpampiasa ary ny fiarovana ny angon-drakitra.
Ity fanambarana ity dia nahatratra ny ambaran'ny FBI, reraky ny fampiasam-bola amin'ny loharanon-karena sarobidy ary fotoana betsaka hahafahany manana fidirana amin'ireo fitaovana marika izay nahavita karazana heloka bevava ny mpampiasa azy, matetika izy ireo dia miantso ny marika miorina amin'ny Cupertino ho toy izany "Genie ratsy".
Araka ny Stephen Flatley, manam-pahaizana FBI manam-pahaizana momba ny forensika, ny fizotry ny fanaparitahana vaovao amin'ny iPhone iray dia nihena tsikelikely, ka hatramin'ny taona vitsivitsy lasa izay dia afaka natao tao anatin'ny 2 andro monja, androany dia manodidina ny 2 volana no vidin'izy ireo, miaraka amin'ny sarany avo kokoa noho izay natokana amin'ity karazana fanao ity.
Ao amin'ny retina mbola ananantsika ny raharaha fitifirana tany San Bernandino, izay nanambanan'ny mpitandro ny filaminana amerikana vola efa ho iray tapitrisa dolara handoavana an'i Cellebrite, orinasa iray manam-pahaizana manokana amin'ny famotehana ny fiarovana ny fitaovana, nokaramaina hamoahana ny iPhone 5C an'ny iray amin'ireo mpitifitra, nefa tsy nahita akory, raha ny fanazavana azo.
Tena henjana ny FBI tamin'ny fanambarana natao tamin'i Apple, satria mandà ny hanokatra "varavarana ambadika" ireo zazalahy Cupertino izay ahafahan'ny mpitandro ny filaminana miditra mora foana raha ilaina. Izany, hoy izy ireo, dia manakana ny famotopotorana ary manao laharam-pahamehana ity toe-javatra ity amin'ny maha-maika ny filaminam-bahoaka.
Amin'izao fotoana izao, raha te hiditra amin'ny fitaovan'ny mpampiasa iray voarohirohy amin'ny heloka bevava dia ilaina ny didim-pitsarana. Na izany aza, ny fanatsarana ny fitohizan'ny fiarovana natolotry ny Apple dia midika fa na ny orinasan-teknolojia aza tsy manana fidirana amin'ny angon-drakitra saro-pitan'ireo mpampiasa azy.
Ary koa amin'ny fikasana hanentana ny mpampiasa anao rehetra hiaro ny findainy, Apple dia namoaka pejy maromaro izay ampahafantariny ny mpanjifany ny fomba hitazomana ny filaminana sy ny fiainana manokana ny fitaovany.
Ho an'ireto "jeneraly ratsy" ireto dia zon'olombelona ifotony ny fiainana manokanaNoho izany, toy ny mahazatra ao amin'ny biraon'ny Cupertino, dia raisin'izy ireo ho zava-dehibe tokoa ny fiarovana ny fitaovany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny FBI dia mamaritra an'i Apple ho "genie ratsy", manondro ny fiarovana avo izay arosony
Ny script ho an'ny Star Wars: The Last Jedi dia nosoratana tamin'ny MacBook Air manokana
Ahoana ny fomba hidirana emoji avy hatrany amin'ny fampiasana hitsin-dàlana fitendry